Misokatra indray ny Terminal VIP VIP manokana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Misokatra indray ny Terminal VIP VIP manokana
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fonosana serivisy VIP dia misy, ankoatry ny zavatra hafa, ny fahazoan-dàlana feno sy ny fadin-tseranana, ny fifehezana ny pasipaoro ary ny serivisy limousine eo amin'ny Terminal VIP sy ny fiaramanidina.
Ny VipWing ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Munich dia mankalaza ny faha-10 taonany ary hisokatra indray
Noho ny areti-mandringana dia voatery nikatona ny Terminal VIP nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay
Hatreto dia mpitsidika maherin'ny 250,000 avy amin'ny firenena maro no nampiasa ny tolotra natolotra
Folo taona lasa izay - ny 1 Jona 2011 - ny VipWing ao amin'ny Seranam-piaramanidina Munich nanokatra ny vavahady voalohany ho an'ireo mpandeha izay mankafy ny serivisy manokana sy ny fijerena manokana.
Noho ny areti-mandringana dia voatery nikatona ny Terminal VIP nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay.
Hatramin'ny androany, ny VipWing dia afaka mandray tsara ireo vahininy eran'izao tontolo izao mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fahadiovana ankehitriny.
Miaraka amin'ireo efitrano malalaky ny tondra-drano sy malalaka, ny VipWing manokana dia manana velarana 1,700 metatra toradroa.
Ny vahiny mandoa vola dia afaka manararaotra ny tolotra na inona na inona zotram-piaramanidina na kilasy famandrihany.
Ireo mpanampy manokana amin'ny fiteny maro dia manome fanohanana rehetra ary mandamina ny dingana rehetra mifandraika amin'ny sidina toy ny fombafomba fifindra-monina, ny fidirana, ny fikirakirana entana, ny famerenam-bola ary ny fahazoan-dàlana, ary ny vahiny kosa miala sasatra ao amin'ny VipWing.
Ny tolotra dia misy ny fidirana amin'ny zaridaina misy labiera an-kalamanjana, ny buffet, ny serivisy fisotroana, ny fandroana malalaka, ny efitrano fisotroana sigara kanto ary ny efitrano fivavahana iraisam-pinoana.
Ny suite tsy miankina misy fahitana mahavariana momba ny akanjo lava, efitrano fatoriana sy efitrano fihaonambe feno fitaovana dia azo ampiana.
Miaraka amin'ny hatsarany Bavaria sy endrika tsy manam-paharoa, ny VipWing dia naharesy lahatra vahiny an'arivony maro eran'izao tontolo izao nandritra ny taona maro.
Hatreto dia mpitsidika maherin'ny 250,000 avy amin'ny firenena maro no nampiasa ny tolotra natolotra.